Setera miloko "Black sequins" - Moi Mili
Home > "Setro mainty"
Sehatra majika noforonina ho an'ny ankizy tia milalao, nofy ary mahafatifaty. Misy singa roa: satroboninahitra sy boribory. Ny satroboninahitra dia voatana mafy avy amin'ny lamba vita amin'ny landy sy ny sequins. Ampifangaro roa izy io ary mifanentana amin'ny lohan'ny zaza sy ny lohan'ny ray aman-dreny amin'ny fatorana an-damosina. Ilay lay dia vita tamin'ny sequins, landy ary hazo kesika. Ny kintana dia nihaza tamin 'ny tongotra, ary ny haingon-tany manontolo dia voaravaka fehin-kibo na taolana. Misy haavon'ny 35 cm. Ny andiany majika Moimili dia ilaina ho an'ny fialamboly, fety akanjo na fotoam-pivoriana.
Lamba: kofehy ary 100% Cana misy fanamarinana OEKO-TEX®.
Default Title - PLN 125.00 PLN